“Kulanka Barcelona ee Spanish Super Cup waa mid ka duwan La Liga” – Diego Simeone – Gool FM
“Kulanka Barcelona ee Spanish Super Cup waa mid ka duwan La Liga” – Diego Simeone
(Madrid) 09 Jan 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa u arka kahor kulanka ay Barcelona kula ciyaarayaan koobka Spanish Super Cup inuu ka duwan yahay ciyaar ay Barca kula ciyaarayaan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Kooxaha Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa caawa ku balansan inay ku wada ciyaaraan wareega afar dhamaadka koobka Spanish Super Cup, iyadoo kooxda soo baxda ay kulanka fiinalka kula ciyaari doonto Axada soo socota naadiga Real Madrid oo xalay kaga soo gudubtay Valencia 1-3.
Haddaba Diego Simeone ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor ciyaarta caawa wuxuu ku sheegay:
“Dabcan waxay noqon doontaa ciyaar ka duwan horyaalka La Liga, halkan guuldarrada waxay ka dhigan tahay in si toos aad uga hari doonto tartanka”.
“Labada kooxood waxay u ciyaarayaan hal natiijo, taasoo ah inay guuleystaan, waa inaan guuleysanaa si aan u gaarno finalka”.
“Inaad kula ciyaarto Barcelona horyaalka La Liga waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka fekerto dhowr xulasho, laga yaabee inaad u ciyarto si aad u hesho bar-bardhac, waxayna ku xiran tahay booska aad kaga jirto miiska kala sareynta, balse kulanka soo aadan waa hal natiijo oo kaliya, taas oo ah guul”.
Kooxda Barcelona oo go’aan ka gaartay mustaqbalka Ousmane Dembélé
“Waxba nagama quseeyaan kooxda aan kula ciyaari doono kulanka finalka ” – Valverde